Ahoana ny fanovana ny lalan'ny fampidinana ny fampiharana SnapTube? - LifeBytes | LifeBytes
Ahoana ny fanovana ny làlan'ny fampidinana ny fampiharana SnapTube?
SnapTube Video Downloader no fampidinana video tsara indrindra ho an'ireo fitaovana Android ampiasainao ankehitriny. Mamela ny fisintomana avy amin'ny tranonkala samihafa toa ny YouTube, MetaCafe, DailyMotion miaraka amin'ny Facebook sy Instagram. Na dia fampiharana ho an'ny android aza izy io dia tsy hita ao amin'ny Google Play Store. Ny antony dia mametra ny fampidinana horonantsary YouTube rehetra i Google. Saingy misy fomba hafa azo atao.
1 Endri-javatra fampiharana SnapTube Downloader:
2 Ahoana no hanovako ny toerana misy ny fisintomana ao amin'ny fampiharana SnapTube?
3 Fomba hanovana ny lalan'ny fisintomana:
4 Ahoana ny fiasan'ny SnapTube?
Endri-javatra fampiharana SnapTube Downloader:
misintona Snaptube APK, ny interface interface mahatalanjona an'ny fampiharana dia ahafahanao mitantana tsara ny mpampidina.
SnapTube dia misy safidy samihafa mba hanafainganana ny fampidinana video.
SnapTube dia manolotra motera fikarohana mahery miaraka amina sary masina.
Ho fanampin'izany, manolotra horonantsary misintona misy kalitao 60FPS sy vahaolana 4K.
Mba hanolorana anao hisintona haingana kokoa, ny rindranasa dia mampiasa fifandraisana maro.
Ho hitanao amin'ny toerana iray ny tranonkala iray manontolo.
Tsy misy doka na pop-up.
Azonao atao ny misintona ireo horonantsary voaroaka ao amin'ny YouTube.
Mora, azo atao ny manova rakitra video ho lasa audio.
Azo ampiasaina koa ny asan-tsoratadidy. Azonao atao ihany koa ny manamboatra fampidinana marobe amin'ny fotoana iray.
Ahoana no hanovako ny toerana misy ny fisintomana ao amin'ny fampiharana SnapTube?
Ny horonan-tsary YouTube rehetra dia voatahiry ho azy eo amin'ny fitehirizana anatiny. Raha te hiditra azy io dia azonao atao ny manaraka ny rohy fitahirizana anatiny> SnapTube> Horonan-tsary. Raha toa ka tsy ampy ny toerana aorian'ny fisintomana horonantsary be loatra dia mety hanelingelina ny fiasan'ny fampiharana hafa izany. Hanomboka hiadana miadana ny fitaovanao rehefa mandeha ny fotoana. Mba hisorohana an'io toe-javatra io dia azonao atao ny manova ny làlan'ny fampidinana an'ireo horonantsary.
Fomba hanovana ny lalan'ny fisintomana:
Sokafy ny mpampidina horonantsary SnapTube.
Misy kisary fiasa eo amin'ny zoro havanana ambony amin'ny efijery. Tsindrio eo raha hanokatra toerana.
Safidio izao ny safidy «Download lalana».
Ary safidio ny MicroSD hitahiry horonantsary amin'ny fitaovana ivelany manomboka izao.
Azonao atao koa ny mamorona fampirimana misaraka. Ao amin'ny zoro ambony ambony, misy kisary fampirimana, kitiho eo.
Omeo anarana toy ny SnapTube ihany koa izy ary sokafy amin'ny fikitihana azy indray mandeha.
Tsy maintsy manamarina azy ianao amin'ny fipihana ny «Safidio ity fampirimana ity». Azonao atao koa ny mamorona subfolder amin'ny fipihana ny safidy "Mamorona folder vaovao".
Hanontany anao indray ny fangatahana fanamafisana, tsindrio ny «Select» hanamafisana azy.
Ankehitriny, ny toerana fampidinana dia novàna soa aman-tsara ho tahiry ivelany. Farany, azonao atao ny misintona ny horonantsary tsy manahy momba ny toerana fitahirizana.
Azonao atao ny milalao ny horonan-tsary avy amin'ny Gallery na afaka manaraka ny tanana ny File Manager> Card SD> SnapTube. Izay ihany.
Ahoana ny fiasan'ny SnapTube?
Araka ny lazain'ny anaran'ny fampiharana amintsika fa alaina ao vetivety izy io. Izy io dia miasa amin'ny alàlan'ny motera fikarohana samihafa.
Fikarohana sokajy: Ny fikarohana ao amin'ny sokajy dia manampy anao hitrandraka ireo atiny tadiavinao satria afaka mampifandray sokajy folo samihafa ianao. Ohatra, horonan-tsary mampihomehy, hira, sary sns. Raha hifamadika amin'ny sokajy iray mankany amin'ny iray hafa, dia esory fotsiny ny efijery miankavia sy miankavanana.
Fikarohana Keyword: Amin'ny alàlan'ny fikarohana teny lakile, azonao atao koa ny mahazo ireo horonan-tsary tadiavina. Aorian'ny hahitanao ny zavatra tadiavinao dia azonao atao ny misintona sy mitahiry azy raha hizaha manaraka.
Trending Hit: Azonao atao ihany koa ny mahita ny fironana sy ny fizarana horonan-tsary amin'ny tabilao mozika sy maro hafa amin'ity.
Azontsika atao ihany koa ny milaza fa ny SnapTube APP dia tena mora ampiasaina ary mampidina haingana. Mba hahazoana ny vokatra HD dia azonao ampiasaina amin'ny $ 1.99 ihany ny kinova famoahana azy. Samy mpifaninana TubeMate, Vidmate na Videoder (
misintona videoder eto) manana ny fiasan'izy ireo ihany, fa ny fiovana dia mitoetra ao amin'ilay interface fampidinana mahery misy safidy hafa. Tokony holazainay fa mety tsy mahazo an'ity fampiharana ity amin'ny Google Play Store ianao noho ny politikan'ny zon'ny mpamorona.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: LifeBytes » Ahoana ny fanovana ny làlan'ny fampidinana ny fampiharana SnapTube?
Ampiasao ny tahan'ny zero ny Credomatic Costa Rica
Mahazoa Card Credomatic Costa Rica Bac